समाचार अपडेट धीरेन्द्रकी कान्छीमाथि फेरि अर्का धक्का काठमाडौं । अदालतबाट �प्रमाणको अभावमा� पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्रकी पत्नी ठहर नभएकी बत्तीसपुतलीकी जया पाण्डेले जन्म दिएकी पुत्री श्रेयाले नागरिकता पनि पाइनन् । हाल अमेरिकाको बोस्टनमा बस्दै आएकी जया उनलाई �धीरेन्द्रपुत्री� कै नाताले नागरिकता दिलाउने योजनामा पनि असफल भइन् । नेपाल छोडेको १५ वर्षपछि फर्किएकी जया तीन साता काठमाडौं बसेर यही शनिबार अमेरिका फर्किदैछिन् । आमा सूर्यकुमारी पाण्डेको घरमै बसेकी जयाले जनआस्थासँगको भेटमा वकिलहरूको कमजोरीका कारण धीरेन्द्रपत्नीका रूपमा आफूले आधिकारिकता नपाएको बताइन् । भनिन्, �वकिलहरू उता (धीरेन्द्र परिवार) सँग मिलेजस्तो छ ।� नेपालको नयाँ कानुनअनुसार, आमाको नामबाट छोरीले नागरिकता पाउने अधिकारको सदुपयोग गर्नेबारे जिज्ञासा राख्दा उनले भनिन्, �म जसरी पनि उनलाई बुबाकै नामको नागरिक दिलाउन चाहन्छु ।� उनले धीरेन्द्रको महाराजगञ्जस्थित निवास �जीवनकुञ्ज� को बासिन्दाका रूपमा छोरी श्रेयाको नागरिकता दावी गरेकी थिइन् । त्यसअनुसार, काठमाडौं महानगरपालिकाको ३ नं. वडा कार्यालय पुगिन् । तर, वडाले बाबुको नागरिकता माग्यो, जो जयासँग छैन । उनले धीरेन्द्रका केही आफन्तसँग नागरिकताबारे सोधिन् पनि । तर, अधिराजकुमारका नाताले धीरेन्द्रले नागरिकताबिना नै सबै सुविधा (राहदानीको समेत) पाएको जवाफ धीरेन्द्रका आफन्तले दिए । यसरी जया धीरेन्द्रको नागरिकता खोज्दै हिँडेको चाल पाएपछि जीवनकुञ्जमा उनको नागरिकताको खोजी भयो । तर, भेटिएन । कतै कुनै सुराकीमार्फत जयाले हात पारिसकेकी त हैनन् भनेर धीरेन्द्रको नागरिकता खोज्दै जाँदा पत्तो लाग्यो कि, त्यो नागरिकता धीरेन्द्रपत्नी प्रेक्षाले निधनअघि राखेकै ठाउँमा थियो । प्रेक्षाको निधनपछि धीरेन्द्रपुत्री पूजा, शितास्मा र दिलासा नाता प्रमाणित गर्न सोही नागरिकता लिएर जिल्ला प्रशासन गएका थिए । र, दिलासाले फेरि स्वर्गीय आमाले राखेकै ठाउँमा राखिन् । निधनअघि धीरेन्द्रकी दिदी (पूर्वअधिराजकुमारी) स्व. शान्ति सिंहका छोरा विनोदले हाइड्रोपावर सञ्चालनका लागि उनको नागरिकता लिएका थिए । धीरेन्द्रले निधन हुनुभन्दा एक साताअघि मात्र विनोदलाई नागरिकता बुझाएका हुन् । तर, दरबार हत्याकाण्डको एक महिना नबित्दै विनोदले प्रेक्षालाई नागरिकता फर्काएको र प्रेक्षाले कानुनतः छोरीहरूको नाता प्रमाणितको प्रक्रिया शुरु गरिसकेकी थिइन् । तर, रारामा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा प्रेक्षाको निधनपछि मात्र उनीहरूले नाता प्रमाणित गरे । यता, जयाचाहिँ धीरेन्द्रले नागरिकता नै नबनाएको सूचना लिएर अमेरिका फर्किन लागेकी छन् । आ�नो संघर्षले नपुगेपछि अब उनले श्रेयालाई धीरेन्द्रपुत्रीका रूपमा नागरिकता दिलाउन माइती नेपालसँग गुहार मागेकी छन् । माइती नेपालका अधिकारीले पनि श्रेयालाई आमाकै नाममा नागरिकता दिलाउन सकिने बताए । तर, जयाले मानिनन् । एकातिर अदालतले अंशमुद्दा हराएको, अर्कातिर प्रशासनले नागरिकता दिन नचाहेको दुईवटा पीडा बोकेर उनी फर्किन लागेकी हुन् । उनले जिल्ला अदालतमा दायर गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा विवाह गरेर घरजम गरिरहेका धीरेन्द्रका तीन छोरीलाई विपक्षी बनाएकी थिइन् । कानुनतः पनि विवाह गरेर गएका छोरीको माइतको सम्पत्तिमा हक लाग्दैन । र, यही कमजोरीमा उनले मुद्दा हारिन् । �त्यसरी विवाह गरेर गएका छोरीलाई किन विपक्षी बनाउनुभयो त ?� जिज्ञासामा उनले भनिन्, �खासमा मलाई उनीहरू (धीरेन्द्रका छोरी) सँग कुनै नराम्रो हुनु छैन । त्यो त एउटा प्रोसेसमात्रै गरेको ।� सन् १९९२ मा लण्डन जाँदा अध्यागमनले दिएको कागज देखाइन्, जसमा �पति धीरेन्द्र वीरविक्रम शाहसँग भेट्न� भनी अंग्रेजीमा लेखिएको थियो । उनले धीरेन्द्रलाई पति दाबी पुग्ने अन्य कागजात पनि सुरक्षित रहेको, तर वकिलहरूको बदमासीले मुद्दा हार्नुपरेको कुरा दोहो�याइन् । उनको पक्षमा अधिवक्ताहरू गुरूप्रसाद बराल र सूर्य केसीले बहस गरेका थिए । त्यसमध्ये केसी माओवादी बुद्धिजीवी संगठनका कृष्ण केसीका भाइ हुन् । धीरेन्द्र परिवारको तर्फबाट अधिवक्ता हिरा रेग्मीले बहस गरेका थिए ।
भेटका क्रममा जयाले धीरेन्द्रसँगको अन्तिम भेटका कुरा सम्झिइन् । धीरेन्द्र त्यसबेला नक्सालस्थित एकजना साथीको घरमा बस्थे । त्यहाँ उनीहरूको भेट हुन्थ्यो । तर, जयाचाहिँ बत्तीसपुतली, द्वारिकाज होटल अघिल्तिर रहेको आमाकै घरमा बसोबास गर्थिन् । दरबार हत्याकाण्डका बेला जया अमेरिकामा थिइन् । पदवी खोसिएका �अधिराजकुमार� धीरेन्द्रले मारिनु केही दिन पहिले मात्र जयालाई सेप्टेम्बरमा नेपाल बोलाएको उनले सुनाइन् (तर, १ जुन, २००१ मा दरबार हत्याकाण्ड भयो) । जयाका अनुसार, सेप्टेम्बरमा राजदरबारले धीरेन्द्रको �अधिराजकुमार� पदवी फर्काउने, तर पत्नीका रूपमा प्रेक्षालाई नभई जयालाई मान्यता दिने कुरामा दाजु (राजा) वीरेन्द्र सहमत भइसकेका थिए । धीरेन्द्रले आफूसँगको भेटमा पनि प्रेक्षासँग असन्तुष्टिका कुरा बारम्बार गरिरहने उनले सुनाइन् । �वास्तवमा उहाँको पारिवारिक जीवन असफल भएपछिमात्रै म श्रीमती भएकी हुँ�, उनले भनिन् । पहिलो भेटबाटै धीरेन्द्रले आफूलाई �मार्क� गरेको उनले दावी गरिन् । �बत्तीसपुतलीमै एकजना नातेदारको घरमा विवाहको भोज थियो । त्यहाँ भेट भएको हो । अनि, उहाँले मलाई फलो गर्नुभयो�, भनिन् ।
अहिले आफूले अदालतबाट नपाएको अधिकार दिलाउनका लागि केही नातेदार सक्रिय भएको उनले बताइन् । तर, तिनको नाम भनिनन् । �नातेदारहरूसँग सधैं कुरा भइराखेको छ, उहाँहरूले हामी कुरा मिलाउँछौं, अड्डा�अदालततिर नधाउनु भनेका छन्�, भनिन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग उनको भेट भएको छैन मात्रै हैन, युरोपबाट फर्किएको एक हप्तापछि पनि ज्ञानेन्द्र विदेशमै रहेको सूचना बोकेर बसेकी रहिछन् । अहिले उनी अमेरिकामा �असाइलम� (शरणार्थीको मान्यता) दिलाउने काममा अनुवादकका रूपमा काम गर्दै छिन् । त्यसक्रममा थुप्रै नेपालीसँग भेट हुने बताइन् । तर, �असाइलम� गर्ने नेपालीमध्ये ९० प्रतिशतले फर्जी विवरण बुझाउने गरेको सुनाइन् । अन्य देशका पनि छन्, फर्जी विवरण दिएर शरणार्थीको मान्यता लिने । तर, त्यस मामिलामा नेपाल अलिक बदनाम भएको उनले सुनाइन् । प्राप्त प्रतिक्रियाहरु	(0) यसमा तपाईको प्रतिक्रिया	(रोमनबाट युनिकोड नेपालीमा लेख्नुहोस्) नाम